Gadra sy voaroba tamin’ny 2009 : Nolatsain’i Marc Ravalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaGadra sy voaroba tamin’ny 2009 : Nolatsain’i Marc Ravalomanana
Nigadragadra foana tamin’ny tsy misy antony (filohan’antoko politika, solombavambahoaka, loholona, ben’ny tanàna, manamboninahitra, sivily), rava fananana tamin’ny tsy misy dikany (Moxe Ramandimbilahatra, Guy Rivo), sns. Izay no azo ilazana ireo mpikatroka TIM ary ireo mpomba an’i Marc Ravalomanana. Tahaka ny sosoa notapohan-drano tokoa mantsy ireo “zanaky dada” ary ireo izay nanao sorona ny ainy ho an’ity filoha teo aloha ity raha nandre fa “tiany hono i Andry Rajoelina ary vonona ny hiara-dia ny tenany”.
Nizaka ny mafy mihitsy anefa ireo mpomba an-dRavalomanana nandritra iny 2009 iny: fisamborana sy herisetra ary fampidirana am-ponja isaka ny mihetsika ary nisy mihitsy ireo namoy ny fananany rehetra vokatry ny hetraketraky ny fitondrana Rajoelina sy ny forongony. Firy tamin’ireo notànana am-ponja nandritra iny krizy 2009 iny no tsy nanana vola nandoavana karama-na mpisolovava, tsy nahavita nanati-bary tany am-ponja noho ny halaviran-toerana, tsy hotanisaina eto intsony ireo namoy fianakaviana, ireo miaramila maty nanohitra ny fitondrana Rajoelina, raha tsy hiresaka afatsy ny zava-nitranga teny amin’ny BANI sy Fort Duchesne, ankoatra ireo lahy sy vavy antitra niharitra masoandro sy orana amam-bolana teny amin’ny MAGRO.
Tsy misy dikany ary tsy misy fotony amin’i Marc Ravalomanana avokoa izany rehetra izany. Fahefana no zava-dehibe aminy, mila an-dRajoelina izy hahazoany fahefana koa izay migadra aoka izy hanefa ny saziny any, izay nanana ny maty aoka izy hisaona sy hitomany any, izay maratra aoka izy hiharitra fanaintainana any, sns. Izay mihitsy raha velabelarina amin’ny teny fohy ny hevitr’ireny fanambarana nataon’i Marc Ravalomanana farany teo ireny.